Ny vehivavy no loharanon’ny fiainan’ny zanak’olom-belona | Région Boeny
Naseho tamin’ny fomba ofisialy an’ireo olom-panjakana sy ny Ray aman-dRenin’ny mpianatra ary ireo mpiara-miombonantoka (Nadiezhda), ireo mpianatra afaka Bakalorea tao amin’ny ivotoerana FAWE Mangarivotra Mahajanga(Forum for Africa Women Educationalists) ny talata faha 03 Oktobra 2017.
Fotoam-pivavahana nentina nitsofan-drano ireo ankizivavy sahirana izay beazina ao amin’ny ivotoerana FAWE no nisantarana ny fotoana. Marihina fa 23 izy ireo no mahazo tombon-tsoa ao amin’ny FAWE eto Mahajanga ka ny 08 tamin’izy ireo no afaka ny fananadinana Bakalorea ny taona 2015 hatramin’ny taona 2017. Samy Bakalorea sokajy D avokoa no afak’izy valo mirahavavy ireto.
Natao indrindra izao fampahafantarana azy valo mirahavavy afaka fanadinam-panjakana izao mba ahafahana mangataka fanampiana amin’ireo malala-tanana sy ny fitondram-panjakana ny amin’ny ho famatsiana ny fianaran’izy ireo any amin’ny Anjery manontolo.
Ny Lehiben’ny Faritra Boeny dia anisany ray mpiahy ireto tovovavy beazina ato amin’ny ivotoerana FAWE ireto, ka manoloana izao vokatra tsara izao dia mankasitraka ny asa ataon’ireo avy ao amin’ny FAWE sy ireo mpiara-miasa ny tenany. Ny Lehiben’ny Kabinetra, Atoa Hemedy moa no nitondra ny hafatra tamin’io talata io. “Isaorako izy ireo nikarakara ireo vehivavy satria ny vehivavy no azo lazaina ho loharanon’ny fiainan’ny zanak’olombelona.” Hoy izy nanatitrantitra.
Ekena hoy kosa ny filohan’ny ivotoerana FAWE Pr Rasoanandrasana Emilienne fa efa manampy ny Faritra Boeny sy ny Prefektioran’ny Mahajanga nefa mbola miangavy azy ireo sy izay malala-tanana ny tenany hanao bebe kokoa satria dia efa misondrotra dia misondrotra ny vidim-piainana, ka tsy vita raha tsy ifanampiana ny fiahiana ireto zazavavy Malagasy ireto